Bentley Systems - Page 13 - Geofumadas
Tani waa liis ka mid ah alaabta AutoDesk iyo Bentley Systems, isku dayaya in ay isku mid noqdaan iyaga, inkastoo ay adagtahay sababtoo ah codsiyada qaarkood waxay leeyihiin jiheyn isku mid ah, laakiin habkoodu mar walba isku mid maahan. Ka hor inta aynaan arkin wax ka mid ah horumarka AutoCAD iyo Microstation. Soo koobid, waxaan qaadan karnaa natiijooyinka soo socda: Diyaarin ...
Ugu dambeyntii waxaan ka hadalnay imaatinka AutoCAD illaa sanadka 25 iyo duruusta 6 laga barto taariikhdeeda. Sababtoo ah Microstation waa mid ka mid ah mashaariicda CAD-yada leh karti weyn ee suuqa, waana hubaal mid ka mid ah dhowr ka mid ah oo ku haray jiil dhan oo nidaam ah kaas oo AutoCAD ay maamusho ...
1 Adigoo isticmaalaya AutoCAD Waxaad dooran kartaa qoraalka aad rabto inaad wax ka beddesho Mashiinka hantida ayaa la furfuray (isbeddel / hanti) ama amarka qoraalka mo Qeybta qoraalka waxaa lagu qorayaa culays xagal beedka waxaa lagu qoray Rotation ... iyo voila. 2 Iyadoo Microstation Si ay u sameeyaan Microstation XM waa ku dhowaad sida la qabashada AutoCAD ...
Miyaad ku riyaaqi kartaa khariidad kaliya?
Saaxiibadayda, ka hor intaadan fasax tegin, markii aan rajaynayo in aan wax badan qoro Waxaan kuu sheegi doonaa sheeko wakhti yar laakiin waa lagama maarmaanka u ah geofanátisoska dabayaaqada kirismaska. Toddobaadkan qaar ka mid ah wada-hawlgalayaasha ayaa waxay i waydiisteen khariidadda aagga meesha aan hadda ka qabanno sahanka cadawga. Ogsoonow farsamada ...
ArcView Bentley Systems ESRI Google Earth GIS kala cayncayn ah
ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, cadastre, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley
magaalada Istanbul (Istanbul) Turkey in qaybsada Magaalooyinka ay ka dhexeeya Asia iyo Europe, loo yaqaan ee muddada Byzantine / Greek sida Constantinople, hadda la saabsan 11 milyan oo qof, ayaa shahaado for heerarka caalamiga ah nidaamka tayada kala duwan biyaha. Sanadkan hirgelinta teknoolajiyada ee maaraynta aad ...
Waxay u muuqataa in isbeddelka ruqsadda ESRI aysan kaliya ku dhaceynin heerka codsiyada webka, laakiin sidoo kale habka ganacsiga. Maanta ESRI waxay bixisaa qiimo gaar ah oo loogu talagalay degmooyinka yaryar, oo dadkooda ay ka hooseeyaan dadka deggan 100,000 si ay uga faa'idaystaan ​​kartida karti-hawleedkooda ...
Hadda waxaan la kulannaa qulqulo tiknoolajiyo badan iyo noocyo badan oo codsigooda ku yaalla nidaamyada xogta juqraafi ah oo suurtogal ah, liiskan, kala-tagaan nooca shatiga. Mid kasta oo ka mid ah waxay leedahay link to bogga aad ka heli karto macluumaad dheeraad ah: Software ganacsi, ama ugu yaraan liisan aan ruqsad lahayn ArcGIS (hoggaamiyaha adduunka ee codsiyada ...
Ka hor inta aan ka wada hadalnay isbarbardhig qiimaha qiimaha, dhowr nuqul oo ka mid ah server-yada khariidadaha, waqtigan ayaan ka wada hadli doonnaa isbarbar dhiga shaqeynta. Tani waxaan u isticmaali doonaa saldhig daraasad ay sameysay Pau Serra del Pozo, Xafiiska Farsamada Cartography iyo GIS Local (Diputación de Barcelona) iyo inkasta oo falanqaynta ay ku saleysantahay ...
Way adagtahay inaad ka baxdo goobo badan oo jira, laakiin si kastaba ha ahaatee dib-u-eegista waxaan isticmaali doonaa kuwa Microsoft oo dhowaan u tixgelinaya isbahaysiga ay ku xiran yihiin SQL Server 2008. Waxaa muhiim ah in la sheego furitaanka Microsoft SQL Server si loo helo lamaanayaal cusub, ka dibna waxay u oggolaanaysaa in la hirgeliyo xogta ku saabsan habka caadiga ah ee waddanka; tan ka hor kaliya ...
Ka mid ah xalka ugu fiican ee ESRI u sii daayay 2.0 waa HTML image Mapper, iyada oo taageero laga helayo xitaa 9x iyo labadaba xNUMXx jir ah. Ka hor inta aynaan aragnay qaar ka mid ah qalabka ESRI, kuwaas oo aan waligood fiicneyn, gaar ahaan sababtoo ah waxay ku adkeysteen in ay ku hayaan qaababka WFS iyo WMS heerkooda gaarka ah ...
ArcGIS-ESRI, Geospatial - GIS, Google Earth / Maps, GIS kala cayncayn ah
Waxay u muuqataa in sawirqaadayaashu aysan ahayn kaliya naqshadeeyayaasha sawirada xun laakiin sidoo kale qulquleyaal xun. Labada tusaaleba, kiiska Manifold ee xNUMX ay u muuqdaan inay isticmaaleen qaar ka mid ah shaashadaha daaqadaha oo kaliya bedelay midabada. Dhibatadu waa in Tennessee Titans ay sidoo kale sameeyeen Kiiska ...
Boggii hore Page 1 ... Page 11 Page 12 Page 13